Tesla Model 3 waa mid rasmi ah oo adigaa iska leh laga bilaabo $ 35.000 | War gadget
Tesla Model 3 waa mid rasmi ah oo adigaa iska leh laga bilaabo $ 35.000
Elon Musk wuxuu sii wadaa khariidadiisa si uu adduunkan uga dhigo mid cagaaran sida ugu macquulsan. Sidaad ogtihiinba, waa agaasimaha guud ee shirkadaha caanka ah sida SpaceX ama Tesla. Iyo tan dambe ee jilaaga maanta, tan iyo Model-ka cusub ee Tesla Model 3 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, Gaariga doonaya inuu isku muujiyo inuu yahay heerka kala-soocida gawaarida shirkadda korontada si buuxda u shaqeeya.
Waxaanan leenahay baaxadda gelitaanka maxaa yeelay waa noocii ugu horreeyay ee labada horay u jiray inay hoos uga dhacaan $ 40.000. Si sax ah, Tesla Model 3 wuxuu ka bilaabmaa $ 35.000 —Sicirada Yurub waa lasoo bandhigi doonaa sanadkaan oo dhan 2017-. Sidoo kale, waa inaan kuu sheegno in Tesla Model 3 uu ka koobnaan doono laba nooc; taasi waa, waxay yeelan doonaan muuqaal isku mid ah laakiin ismaamulkoodu wuu ka duwanaan doonaa. Waad geli kartaa nooca 'Standard' ama nooca 'Long Range Battery'.
1 Baabuur deg deg ah oo leh ismaamul wanaagsan oo si buuxda u koronto ku shaqeeya
2 Qalabka Tesla 3
3 Xirmooyinka Premium iyo Autopilot sidoo kale waxaa laga heli karaa Model 3
4 Dammaanad gaari iyo batari
Baabuur deg deg ah oo leh ismaamul wanaagsan oo si buuxda u koronto ku shaqeeya
Labada nooc midkood waxaad awoodi doontaa inaad ku safarto wax ka badan 300 kiilomitir hal mar. Laakiin ka hor intaadan ku siin xogta madax-bannaanida, kuu sheeg in labada moodel ay noqon doonaan gawaari dhakhso leh. Marka loo eego xogta ay shirkaddu ku soo bandhigtay soo bandhigideeda, Heerka 'Tesla Model 3' wuxuu awoodi doonaa inuu sameeyo 0-100 km / saac kaliya 5,6 ilbiriqsi wuxuuna yeelan doonaa xawaare sare oo ah 209 km / h. Hadda, haddii aad doorato nooca 'Tesla Model 3 Lon Range Battery', jaantusku wuxuu hoos ugu dhici doonaa 5,1 ilbidhiqsi xawaaraha ugu sarreeyana wuxuu gaarayaa 225 km / h.
Laakiin markaad ka hadasho baabuur koronto ku shaqeeya, hubaal waxaad la yaabban tahay waxa is-maamul ee labada nooc noqon doona. Hagaag, hadaad dooratid nooca $ 35.000, oo lacag buuxda lagaa qaadayo waxaad safri kartaa 354 kilomitir. Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaad hesho Battery Tesla Model 3 Long Range Battery - waa inaad fargeeto $ 9.000 dheeraad ah ($ 44.000 wadar ahaan) - xaddiga ayaa kordhi doona illaa 499 kilomitir.
Macluumaadka waqtiyada rarka sidoo kale waa la bixiyay. Haddii aad isticmaasho Tesla 'Supercharger', 30 daqiiqo gudahood waxaad ku soo dallaci doontaa batariga gaariga si aad ugu socon karto 209 kilomitir. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa gaariga ka qaadaya marinka caadiga ah, saacad kasta oo aad lacag buuxineysid waxaad heli doontaa masaafo dhan 48 kiilomitir.
Qalabka Tesla 3
Qalabka Tesla Model 3 aad ayuu u waasicsan yahay heer ahaan: Isku xirka WiFi / LTE, 15-inch shaashad taabasho badan ah si loo xakameeyo wax walba. Waxaad awoodi doontaa inaad gasho gudaha gaariga adigoon taaban albaabada - ha furin iyo inaad xirto toona -, waxaa ku qalabaysan 8 kaamirooyin iyo 12 dareemayaal ultrasonic ah si nidaamyada amniga ay si fiican ugu shaqeeyaan waqti kasta. Waxa kale oo aad lahaan doontaa saldhigyo badan oo USB ah, baro kaydsan oo kala duwan - jirkiisu waa 15 fuudh cubic (424 litir) -. Waxaadna dhegaysan kartaa raadiyaha FM-ka ama internetka (Streaming).
Dabcan ma aysan ilaawin xakamaynta codka, ku xirnaanta Bluetooth ee gacmaha-bannaan ama meel gudaha ah taas qaadi karo ilaa 5 qof oo degan.
Dhanka kale, labada noocba waad ku hammiyi kartaa inaad haysato siyaado isku mid ah. Bilawga, rinjiga caadiga ah waa madow; Haddii aad rabto inaad iibsato mid ka mid ah shanta midab, waxaad bixin doontaa $ 1.000 dheeraad ah. Giraangiraha, dhanka kale, waa 18 inji, laakiin waxaad heli kartaa nooc 19-inch ah oo bixiya 1.500 doolar oo dheeri ah.
Xirmooyinka Premium iyo Autopilot sidoo kale waxaa laga heli karaa Model 3
Sidoo kale waxaad ka heli kartaa xirmo Premium ah kaas oo dekedo badan oo USB ah lagu daro dhinaca dambe ee qolka; nidaam dhawaaq sare leh; daaqadaha madoow ee leh ka hortagga ultraviolet iyo falaadhaha infrared; iyo waliba agab premium kuraasta iyo qurxinta albaabbada dhinacyadeeda. Xirmadaani waxay ku kici doontaa $ 5.000 oo dheeraad ah.
Autopilot iyo suurtagalnimada in Tesla Model 3 ay sidoo kale noqon doonaan xirmooyin ikhtiyaari ah. Inta udhaxeysa labada xirmo waxaad bixin doontaa $ 8.000 oo dheeri ah. Iyo sida hadda ay tahay, dhammaan hagaajinta waxaa lagu heli doonaa iyada oo loo marayo cusbooneysiinta software.
Dammaanad gaari iyo batari
Ugu dambeyntiina, waxaan kuu sheegayaa in dammaanadda Tesla Model 3 ay ku kala duwan tahay gaariga iyo batterigiisa. Marka ugu horeysa, waxaad heleysaa damaanad 4 sano ama 50.000 mayl (80.468 kilomitir). Si kastaba ha noqotee, baytariyada waxay helayaan wakhti yar oo dheeri ah. Nooca Heerka ah wuxuu noqon doonaa 8 sano ama 100.000 mayl safray (161.000 kilomitir). Hadda, nooca Batroolka Dheer, sidoo kale wuxuu ahaan doonaa 8 sano ama 120.000 mayl (193.000 kiilomitir safray). Xaaladahan oo kale (sida dhammaan noocyada), waxay ku xirnaan doontaa tirada timaadda waqti hore.
Sida Elon Musk sheegay inta lagu gudajiray soo bandhigida, Tesla Model 3 ayaa bilaabeysa in hadda la qaybiyo. Si kastaba ha noqotee, qaabka Lon Range ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee sidaas sameeya. Nooca caadiga ah wuxuu imaan doonaa dhamaadka sanadka iyo sidaan horeyba u sheegnay, qiimahiisu waa $ 35.000, waa kan ugu raqiisan Tesla ee kujira buuga. Ma go'aansan doontaa inaad hesho? Miyaad ku dari lahayd wax dheeraad ah nooca taxanaha ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Tesla Model 3 waa mid rasmi ah oo adigaa iska leh laga bilaabo $ 35.000
Maria Carmen Almerich Guddoomiye dijo
Hagaag, waxaad rabto waa makiinada dharka lagu dhaqo!
Jawaab si Maria Carmen Almerich Silla
Arturo Miguel Pukall Saciid dijo
Jawaab Arturo Miguel Pukall Said